GARACAD(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa gaaray goor dhaw magaalada Garacad ee gobalka Mudug, isagoo ay wehliyaan Maalgashadayaal u dhashay dalalkii ka qeybgalay kulankii Maalgashiga Puntland ee shalay galab ku soo dhamaaday magaalada Garoowe.
Madaxweynaha ayaa xooga saaraya sidii taabagal looga dhigi lahaa qorshaha meelmarinta ama dhismaha Dekedda Garacad oo ah mida ugu weyn ee Soomaaliya oo uu horey u balan qaaday in u ka shaqeynayo.
Garacad ayaa laga bilaabayaa dhismaha qeybta Badda ee dekedda cusub oo ah shaqada ugu balaaran ama ugu weyn halka laga qabanayo, waxaana lafilayaa in ay goobjoog u noqdaan Madaxda Puntland talaabada arrintan ku aadan.
Ka qeybgalayaasha Maalgashi ee halkaas tagaya ayaa lafilayaa in ay ku dhawaaqan yabooh ku wajahan maalgalinta ay ku darsanayaan Dekedan, balse warar hoose ayaa sheegaya ina y qaarkood goor horeba sii sheegeen waxyaabaha ay doonayaan.
Dekeddan cusub waa mid weyn oo ay fikradeeda dhismaha lahaayeen ganacsato, Isimadda iyo dadka deegaanka, waxayse dhismaheedu soo jiitay indhaha gobalka oo dhan, iyadoo ay dad badan maanka ku hayaan haddii ay dhisanto in ay noqon doonto mida ugu balaaran ee Geeska Afrika.